Xadiiska Mawduuca Qeybta 1aad | U adeeg Xadiith-ka Rasuulka
Xadiiska Mawduuca Qeybta 1aad
Waa maxay Xadiiska Mawduuca?
Luuqad ahaan: Mawduuc waxaa la yidhaahdaa “وضع الشيء” .oo laga wado “shey la dulsaaro” . Tusaale marka la leeyahay qofkaas waxuu dhigay hadalkaas ama wuu korsaaray shegyaas iwm.
Isdhilaax ahaan: Xadiiska mowduuca ah waa xadiis lagu been abuurtay, lana sameeyay, ka dibna loo tiiriyay Rasuulka scw. Taas oo aan ahayn ficil uu sameeyey oo laga arkay , ama hadal uu ku hadlay ama taqriir (taqriir waxaa loola jeedaa wax Rasuulka scw agtiisa lagu sameeyey ama lagu yiri kadibna uusan ka reebin saxaabada ama ka hadal) sidoo kale in loo tiiriyo siffo uusan lahayn. Xadiiska noocaas ah ayaa la dhahaa “Xadiis Mawduuc ah”
Qeybaha xadiiska marka laga hadlayo Xadiiska Mawduuca waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay axadiista dhaciifka nooca ugu xun. Culimada qaarna waxay ku tiriyaanba inuu noocani yahay qayb ka gooni ah,oo qeybaha xadiiska daciifka kumaba tiriyaan. Xukunkiisa:
Waxay isku raaceen culimadu inaysan u bannaaneyn cidna inay soo wariso xadiis Mowduuc ah. Culimaduna waxay daliishteen Xadiiskii Rasuulka scw ee ahaa. ‏(‏من حدث عني يبحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين‏)‏‏.‏ رواه مسلم‏
Xadiiskaan wuxuu Rasuulku scw ku cadeynayaa qofka ka sheega xadiis uu arkayo inuu yahay been laga abuurtay Rasuulka scw inuu yahay qofkaasi beenalayaasha midkood. Culimada Ahlu sunna dhamaantood waxay isku raaceen in been abuurashada Nabbiga scw ay ka mid tahay danbiyada waa weyn oo aysan sinaba ku banaanayn in Nabiga scw laga sheego been.
Sidoo kale waxay culimadu isku raaceen in la celiyo oo lagu diido warinta qofka ku been abuurta Rasuulka scw . Waana xaaraam bay yidhaahdeen in la weriyo xadiis Mowduuc ah hadaan la cadeyneyn inay yihiin been/mawduuc,hadiise la cadeeyo inuu mowduuc yahay waa gooni..
Rasuulku scw, wuxuu xadiisyo badan uga digay in lagu been abuurto, oo wuxuusan orana laga sheego .Xadiiskan uu werinayo Muqiirah bin shucbah wuxu yiri ,waxan maqlay Nabiga scw oo leh:”Been abuuradka la iga been abuurto la mid maaha been abuuradka laga sameeyo dadyowga kale, qofkii iga been abuurta si kas ah haka diyaarsado booskiisa naarta” .Bukhari.
Laba qaab/nooc oo Nabiga scw loogu been abuurta:
1. In qofka xadiiska mowduuca ah sameystay isagu iska alifto hadal kadibna u sameeyo isnaad, sidaana uu ku wariyo xadiis mowduuc ah.
2… iyo inuu ka soo qaato hadal qaar ka midda dadka Xikmada leh ama dad kaleba ka dibna uu u sameeyo isnaad.
Sidee lagu ogaan karaa xadiiska mowduuca ah ?
Xadiiska mowduuca ah waxaa lagu ogaan karaa marka laga soo tago isnaadkiisa dhowr siyaabood .
1. Waa iyadii oo uu qofkii sameeyey xadiiska mowduuca ah laftigiisu uu qirto inuu sameeyay xadiiskan, sida uu qirtay ninka la yiraahdo Abii Cismat Nuux bin abii Maryama, isagoo sameeyay axaadiis mowduuc ah oo ku saabsanaa Fadliga ay suurad welba oo Qur’aanka leedahay. Marka la weydiiyayna waxuu yidhi” sababtoo ah waxan rabaa inaan dadka jeclaysiiyo Quraanka”.
2. Sidoo kale inuu qofkii xadiiskaa mowduuca ah sameyeeyay uu xadiis ka weriyo sheekh uu leeyahay wax baan ka bartay, kadibna la ogaado inuu sheekhaa u sheegayo dhintay isagoonba dhalan, xadiiskaas uu sheegayna aan laga maqal isaga mahee. cid kale .
3. Waxaa kaloo lagu ogaan karaa in uu noqdo kan wax warinaya Raafidi/shiico, xadiiska uu werinayana uu ku saabsan yahay fadliga ahlu baytka . Marka way iska caddahay meeshuu u janjeedho.
4. Amaba waxaa laga yaaba inuu xadiiskuba yahay mid khilaafsan Qur’aanka . Waayo saan ognahay Sunnada Nabiga scw iyo Qur’aanku isma khilaafaan.
Qeybta 2aad la soco InshaAllah
from → Duruus Yaryar Cilmul Xadiith, Xadiiska Mawduuca Q1aad
← Imaam Jalaaludiin As-Suyuudi
Xadiiska Mawduuca Qeybtii 2aad →